“Xukumada la soo dhisayo waa in aysan ku mashquulin wax aan…
Hogamiyaha Dowlad-goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo ka hadlayey munaasabadii 1-da August ee Puntland oo xalay ka dhacday xarunta gobolka Mudug ee Gaalkacyo ayaa ka digey in Ra’iisul wasaaraha la soo magacaabi doono uu isku “ku mashquuliyo” dhismaha Maxkamadda Dastuuriga ah ee dalka badalkii uu doorasho ka shaqayn lahayn.
Siciid Cabdullaahi Deni oo sharci darro ku tilmaamay magacaabida xubnaha Golaha Adeega Garsoorka iyo Hay’adda Batroolka ayaa Hogamiyaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi madaxweyne Farmaajo ugu baaqay in uusan shacabka wada khaldan ku hogaamin sida uu hadalka u dhigay.
“Golaha Adeega Garsoorka oo ah qodob aad muhiim ugu ah dowlad-dhiska Soomaaliya oo ah hay’adda saddexaad ee aas-aaska u ah waliba sharciga oo ay ka dhalan maxkamadii dastuuriga ahayd sidda sharci darada ah ee loo maray iyo iyaga oo aan awood u lahayn in ay saxiixaan oo Garyaqaanadii guud, bulshadda rayidka iyo cid walba ay ka qayliyeen; madaxweyne Farmaajo arrintaas haka digtoonaado,” ayuu ka yiri xafladda.
“Dalkaan haduu soo kabanayaa yaanan dib loogu celin kala irdhow” ayuu hadalkiisa raaciyay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo ka digay in la meelmariyo sharciyada ay soo saaraan baarlamaanka waayay kalsoonida golaha shacabka.
Hogamiyaha oo baaq u diray beesha caalamka ayaa sheegay in ay muhiim tahay waxa lagu heshiiyay in sidooda loo meermariyo .
“Arrinta ku saabsan kheyraadka iyo batroolka, iyaddana yaan lagu kadsoomin, caalamkana waxaan u sheegayaa hantida Umadda Soomaaliyeed heshiiska ku ahayd cidii gadata iyaddaa mas’uul ka ah.ayuu yiri Siciid Deni.
Hogamiyaha ayaa sheegay in aysan Puntland qayb ka ahayn sharciga badroolka oo ay meel mariyeen labada gole ee Baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya,Madaxweynuhuna uu saxiixay 8 February, 2020.
“ Puntland horey u sheegtay xeerkaas kama tirsana, guddiga la sheegayo cidna kuma darsan,” ayuu yiri Siciid Deni.
“Xukumadda afarta bilood u hartay shuruuc rasmi ah xataa dowlad rasmi ah oo ra’iisul wasaare sax ah hadey soo magacaabaan howlahaas in ay isku mashquuliyaan maahan xataa; ra’iisul wasaaraha uu soo magacaabayo iyo xukuumadiisa muddo xileedka yar ee dhiman waxaa laga rabaa dalka in ay doorasho geliyaan, wax kale in ay waqti ku lumiyaan lagama rabo” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Hogamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi ayaa ka dhawaajiyey in ay Hogamiyayaasha dowladda federaalka kula xisaabtamayaan shirka madaxda Xukumadda iyo Dowlad-goboleedyada ee bartamaha Augost oo balansanyahay Dhuusamareeb (Dhuusamareeb3).
Hogamiyaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sharciga Badroolka saxiixay 8 February, 2020, maadaama uu ka soo gudbay Labada Aqal ee Baarlamanka Federaalka Soomaaliya, Golaha Xukuumadda, Xildhibaannada iyo dhammaan khubaradii Soomaaliyeed ee qaybta ka qaatay diyaarinta sharcigaan.
Sharciga Baatroolka ayaa ku saleysan sharciyaddii Batroolka iyo macdanta dalka, dastuurka iyo Heshiiska Lahaanshaha, Maamulka iyo Wadaagga Kheyraadka Dabiiciga ee lagu saxiixay Baydhabo June 2018.